Askar lagu dilay Pakistan - BBC News Somali
Askar lagu dilay Pakistan
18 Sebtembar 2015
Militariga Pakistan ayaa sheegay in todoba iyo toban ka mid ah ciidamadooda lagu dilay weerar ay ku soo qaadeen koox xag jir ah xero ay ciidamadda Cirka ee Pakistan ay ku lahaayeen Magaaladda Peshawar ee ku taala waqooyiga Galbeed ee dalka.
Lix iyo toban ka mid ah askrta ayaa la dilay iyagoo salaadda subax ku tukanaya masjid ku yaala xerada dhexdeeda, halka sarkaalna lagu dilay isaga oo hogaaminaya ciidamo dagaal jabaab ah ku qaaday dadka weerarka soo qaaday.
In ka badan labaatan kale ayaa ku wacmay dagaalkaasi. Afhayeenka Militariga, Asim Bajwa ayaa sheegay in seddex iyo toban ka mid ah raggii xag jirka ahaa ee weerarka soo qaaday la dilay, hase ahaatee uu dagaalku wali socodo.
Waxaa kale oo uu sheegay in raggani ay xoog ku galeen xeradda iyagoo xirran dharka ciidamadda. Waxayna isu qeybiyeen labo kooxood oo midna ay weerartay masjidka, kooxda kalena waxay weerartay qolalka ilaaladda xeradda.